Dagaal xooggan oo dhex maray ciidamo ka wada tirsan Dowladda | KEYDMEDIA ONLINE
Dagaal xooggan oo dhex maray ciidamo ka wada tirsan Dowladda
Is-rasaaseyn culus ayaa dhexmaratay Ciidamada Dowladda ee ku sagan magaalada Doolow, waxaana la soo warinayaa khasaaro hordhac ah.
DOOWLOW, Soomaaliya - Wararka ka imaanaya degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in iska hor imaad muddo socday oo u dhaxeeyay Ciidanka Nabad sugida degmada Doolow iyo kuwa Dowladda Fadaraalka ee dhamadki sanadkii hore laga qaaday Muqdisho uu ka dhacay gudaha magaalada.
Sida ay sheegayaan dad goobjoogayaal ah, dagaalka ayaa ka dhashay muran soo kala dhex galay labada dhinac, waxaana ka dhashay khasaaro xooggan.
Ilaa iyo hadda lama shaacin waxa sababay muranka keenay is-rasaasaynta labada ciidan dhexmartay, mana jiraan wax war oo ilaa iyo hada kasoo baxay laamaha amniga degmadaas oo ku saabasan khasaaraha rasmiga ah ee dagaalka.
Dagaalka ciidanka dowlada dhexmara ayaa inta badan soo noq-noqda, waxaana khubarada amniga ay sheegaan in taasi ay ugu wacan tahay kala qaybsanaanta ciidanka ee uu abuuray Farmaajo tan iyo marka uu xilka Madax-waynaha qabtay billowgi 2017.
Doolow, waxa ay ka mid tahay degannada ay Kooxda Farmaajo ka fara-maroojiyeen maamulka Jubballand, waxaana magaalada ku wada sugan ciidamo kala duwan oo qaarkood dhawaan laga qaaday degmada Beldxaawo.